Peptide Cosmetic Peptide Tayada Sare Hexapeptide-10 anti-gabowga iyo CAS 146439-94-3 Soo-saaraha iyo Bixiyaha | Zhuoer
Peptides -ka la isku qurxiyo
Hexapeptide-10 waxay kor u qaadeysaa dib-u-dhiska kolajka waxayna caawisaa yareynta khadadka wanaagsan iyo xajmiga daloolka.
Magaca badeecada Hexapeptide-10
Isku xigxiga H-Ser- Ile-Lys-Val-Ala-Val-OH
Lambarka CAS 146439-94-3
Qaaciddada Molecular C28H53N7O8
Miisaanka Caanaha 615.77
Daahirsanaanta 95.0% min
Xallinta Biyo milmi kara
Xidhmada 1g/dhalo, 5g/dhalo, 10g/dhalo ama habayn
Kaydinta iyo Nolosha shelf Hexapeptide -10 waa mid deggan 24 bilood laga bilaabo taariikhda la soo saaray ee -20 ℃ ilaa -15 ℃ ee qaboojiyaha. Waxaa laga ilaaliyaa iftiinka, xir xirmada hawo ka ilaali marka aan la isticmaalin.
COA & MSDS La heli karo
Dheefta la isku qurxiyo
Maqaarka ayaa dib -u -habayn lagu sameeyay, oo la buuxiyay (+19% cufnaanta maqaarka 2 bilood ka dib), adkaysan oo ka sii dabacsan, ka -soo -kabashadiisa buuxda.
Hexapeptide-10: wuxuu ka yimid isku xigxiga laminin, kaas oo soo celiya qaab dhismeedka maqaarka. Waxay kordhisaa laminin-5, alpha6-integrin iyo hemidesmosomes, sidaas darteed waxay xoojineysaa isgoyska dermal-epidermal. Hexapeptide-10, maqaarku waa dib-u-habayn, dib-u-buuxin, adkaysi iyo dabacsanaan badan, oo ka soo kabanaysa buuxnaantiisa.
Kareemada daryeelka maqaarka, serum, gel, kareem ...
Sideen u qaataa Hexapeptide-10?
T/T (wareejinta telex), Western Union, MoneyGram, kaarka amaahda, PayPal,
Hubinta Ganacsiga Alibaba, BTC (bitcoin), iwm.
≤100kg: saddex maalmood oo shaqo gudahood kadib markii lacag -bixinta la helay.
＞100kg: hal toddobaad
ama sidaad u baahan tahay.
Ku kaydi weelka si adag u xiran meel qalalan & qabow.
Ha u soo bandhigin qorraxda tooska ah.
Hore: Cosmetic peptide Hexapeptide-9 budada ka hortagga duuduubka kahortagga gabowga CAS 1228371-11-6
Xiga: Cosmetic peptide Nonapeptide-1 budada ka hortagga midabaynta iyo iftiinka maqaarkaCAS 158563-45-2
Peptide Cosmetic Nonapeptide-1 budada ka hortagga doofaarka ...
Myristoyl pentapeptide-17 ee dhererka/qaro weyn ...
Cosmetic peptide Acetyl hexapeptide-1 budada ta ...
Cosmetic peptide Acetyl octapeptide-3/Snap-8 iyo ...
Cosmetic peptide Hexapeptide-9 budada lidka lidka ...